स्काउटको अभियानः स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको बृहत 'नेटवर्क' | Kendrabindu Nepal Online News
स्काउटको अभियानः स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको बृहत ‘नेटवर्क’
७ माघ २०७६, मंगलवार १७:४८
सातवटै प्रदेशमा आधारभूत तालिम
नवलपरासीको वर्दघाटस्थित त्रिवेणी शसस्त्र प्रहरी बलको तालिम केन्द्र यतिबेला स्काउटमय भएको छ । जहाँ ५ नम्वर प्रदेशका १२ जिल्ला र एक सय ९ वटा स्थानीय तहका गरी ७५३ जना स्काउट सदस्य र प्रशिक्षकहरु सहभागि छन् । गत माघ ३ गतेदेखि शुरु भएको प्रदेश स्तरीय स्काउट आधारभूूत तालिमका लागि उनीहरु त्यहाँ उपस्थित भएका हुन् ।
तालिमको प्रदेश नम्वर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गत माघ ३ गते उद्ध्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालका युवाहरुलाई समाज र राष्ट्रप्रति कर्तव्यबोध गराउन र उनीहरुलाई नैतिक र चरित्रवान बनाउन स्काउटले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्पूर्ण स्थानीय तह र विद्यालयहरुमा स्काउट अभियान संचालन गर्न जस्तोसुकै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले युवाहरुमा नेतृत्व विकास, विपत्त व्यवस्थापन, सामाजिक सेवा र राष्ट्रप्रेम जगाउन तालिम आयोजना गरिएको बताए । राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न स्काउटले व्यापकरुपमा युवा परिचालन गर्ने बताउँदै भण्डारीले भने, “सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ‘एक विद्यालय एक स्काउट युनिट’को अवधारणालाई सार्थक तुल्याउने छौं ।” प्रदेश स्तरीय स्काउट आधारभूत तालिमपछि पालिकाहरुमा स्थानीय र प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय समिती गठन गर्ने तयारी रहेको संयोजक भण्डारीले बताए ।
नेपाल स्काउटले विपत व्यवस्थापनदेखि नेतृत्व विकाससम्मको चार तहको तालिम दिइरहेको छ । मुलुकका लागि आवश्यक सहयोगी युुवाशक्ति निर्माणका लागि, विपत्तमा सहयोग गर्नसक्ने सहयोगी युुवाहरू उत्पादनका लागि र समाज विकासका लागि यो तालिमले सहयोग पुग्ने भण्डारी बताउँछन् ।
आठ जनासम्मको समूहलाई स्काउटमा ‘पेट्रोल’ भनिन्छ । बिहान खाजा खाएपछि ‘पेट्रोल’ बस्ने स्थानमा निरीक्षण गरिन्छ । त्यसपछि झन्डोत्तोलनमा सामेल हुन्छन् । त्यसपछि व्यक्तिगत र क्याम्पको सरसफाइ गरिन्छ । नयाँ योजना र कामहरुको बारेमा छलफल हुन्छ । स्काउट एउटा टिमवर्क भएकाले कुनै काम गर्दा एक जनाको गल्ती भयो भने त्यहाँ सामुहिक गल्ती ठहरिने नेपाल स्काउटका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराईले बताए ।
तालिममा सहभागि स्काउट सदस्यहरुले स्काउटको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनेछन् । त्यस्तै स्काउट कसरी जीवन उपयोगी छ ? अप्ठ्यारो परिस्थितीमा आफुलाई कसरी अनुकुल बनाउने ? नेतृत्व विकास कसरी गर्ने ? जस्ता जिज्ञासाहरुको समाधान हुनेछन् ।
स्काउट सदस्यहरुलाई तालिम दिनका लागि एक सय १० जना प्रशिक्षकहरु खटिएका छन् । सहभागीलाई ६ देखि ८ जनाको समूहमा विभाजन गरेर तालिम दिइएको छ । स्काउटका तालिममा प्रशिक्षार्थीहरुले पेट्रोल सिस्टममा पकाएर खाने, समयमा काम सक्ने, सँगै बस्ने र आराम गर्नै गर्दछन् । यो तालिम लिएका प्रशिक्षार्थीले ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई तालिम दिन सक्छन् ।
प्रदेश ५ मा जारी यो तालिम भोलि (बुधबार) सम्पन्न हुँदैछ । स्काउटले प्रदेश नम्वर १ र २ मा आधारभूूत तालिम सञ्चालन गरिसकेको छ । अब चाँडै नै अन्य प्रदेशहरुमा पनि तालिम संचालन गर्ने संयोजक भण्डारीले बताए ।
तीन वर्षमा ३ लाख १५ हजार सदस्य
नेपालमा सर्वप्रथम राजा त्रिभुवनको पाला (वि.सं. २००९) मा स्काउट भित्रिएको हो । त्यसबेला भारतबाट प्रशिक्षकहरु आएर नेपालीहरुलाई तालिम दिएका थिए । तालिम लिएका मध्ये राष्ट्रकवि माधव घिमिरे पनि हुन् । नेपालमा हाल करिव ६४ हजार स्काउट सदस्य छन् ।
निर्देशक भट्टराईले आगामी तीन वर्षमा स्काउट सदस्यको संख्या तीन लाख १५ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । सदस्य विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उनले भने, “स्काउटलाई हरेक स्थानीय निकायमा पुर्‍याउन हामीले संख्यात्मक र गुणात्मक अभिवृद्धिलाई जोड दिएका छौं ।”
हरेक स्थानीय तहमा स्वयंसेवक
मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्काउटले पनि आफ्नो संगठनलाई सोही ढाँचामा लैजान शुरु गरेको छ । सोही बमोजिम स्काउटले हरेक प्रदेशका स्थानीय तहमा स्काउटलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
स्वस्थ, विकृतिमुक्त र आपत विपतमा सहयोगी समाज निर्माण गर्नु स्काउटको उद्धेश्य रहेको बताउँदै भण्डारीले भने, “हामीले पालिकामा स्वयंसेवक उत्पादन गरी स्थानीय शासनमा सुशासन कायम गर्न सघाउने छौं ।” त्यसै अनुसार स्काउटले युवा परिचालनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै १५ हजार युवा परिचालन गरिसकेको निर्देशक भट्टराई बताउँछन् । त्यस्तै स्काउटले आफ्नो युवा ‘सेक्सन’लाई विकास गर्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ । नेपालमा स्काउट ऐन २०५० वमोजिम यसले काम गरिरहेको छ ।
‘रोभर मूट’ देखि ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री’ सम्म
नेपाल स्काउटले दैनिकजसो विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । स्काउटको पछिल्लो प्रभावकारी कार्यक्रममध्ये ‘रोभर मूट’ र ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमहरु हुन् ।
स्काउटले गत जेठमा ‘समृद्धिका लागि सहकार्य’ भन्ने नारासहित कास्कीको पोखरामा ऐतिहासिक ‘रोभर मूट’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । युवायुवतीहरुको शारिरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक पक्षहरुको विकास गर्ने मुख्य उद्धेश्यका साथ आयोजित कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहका युवायुवतीहरुको सहभागिता थियो ।
पाँच दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा भारत, ताइवान, बंगलादेश, फिलिपिन्स, जोर्डन, अमेरिका, बेलायत, मलेसिया, थाईल्याण्ड, इजिप्त, ताइवान, युगाण्डा, लग्जमवर्गलगायतका मुलुकहरुबाट ५ सय जना विदेशी सहभागि भएका थिए ।
त्यस्तै स्काउटले ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै आएको छ । नेपाल स्काउटका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराईले बालबालिकाहरुलाई सरकार आफूसँगै भएको आभास दिलाउन कार्यक्रम शुरु गरिएको जानकारी दिए ।
स्काउटले अहिलेसम्म दुईपटक यो कार्यक्रम संचालन गरिसकेको जानकारी दिँदै भट्टराईले भने, “नागरिकलाई राज्यप्रति दायित्ववोध गराउन यस्तो कार्यक्रमहरु आवश्यक हुन्छ, यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं ।” यो वर्ष गत जनवरी पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालबालिकाहरूले अन्तरक्रिया गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नेपाल स्काउटका संरक्षक पनि हुन् ।
विश्वका १९६ वटा मुलुकमा स्काउटका सदस्यहरु सक्रिय छन् । दैनिक जसो विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका हुन्छन् । ती कार्यक्रमहरुमा सहभागि हुन नेपाललाई पनि निमन्त्रण आइरहेका हुन्छन् । नेपाल स्काउटले अब त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागिता बढाउने नीति लिएको भट्टराईले बताए । “स्काउट सदस्यहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि अब विदेशमा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुमा नेपाली स्काउटहरुको सहभागितालाई बढाउने छौं” उनले भने ।
सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि स्काउटले काम गरिरहेको निर्देशक भट्टराईले बताए । उनले भिजिट नेपाल क्याम्प सञ्चालन गरी विदेशी स्काउटहरुलाई नेपालमा घुमाउन ल्याउने योजना बनाइरहेको पनि जानकारी दिए ।
स्काउटमा किन ?
स्काउटमा लागेर के नै पाइन्छ र ! कतिपयले यस्तो पनि सोच्ने गर्छन् । तर, नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारी भने यो सोच नै गलत भएको बताउँछन् ।
व्यक्तिको चारित्रिक तथा व्यक्तित्व विकासका लागि स्काउटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भण्डारीको तर्क छ । बालबालिका तथा युवाहरुको चारित्रिक निर्माण तथा व्यक्तित्व विकासका लागि देशव्यापी अभियान थालिएको बताउँदै भण्डारीले भने, “व्यक्तिको सर्वांगिक विकास गरी प्रगतिको बाटो पहिल्याउन स्काउटले सघाउछ ।”
नेपाल स्काउटका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराई पनि स्काउटले व्यक्तिलाई सवल र सक्षम बनाउने बताउँछन् । “कुनै व्यक्तिको मानसिक, समाजिक, नैतिक तथा सम्पूर्ण विकासका लागि स्काउटले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ ।” उनले भने । जीवनको सही मार्ग पहिल्याउन स्काउट आधारस्तम्भ भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल स्काउट नेपालको ‘स्काउटिङ’ र ‘गाइडिङ’ संस्था भएकाले यसले दिने तालिम विश्वासयोग्य हुने उनको भनाइ छ । स्काउट सबैको मित्र भएकाले परस्परमा भातृत्व तथा भगिनित्व कायम हुने बताउँदै उनले भने, “स्काउटका सदस्यहरुमा विनम्रता, अनुशासन र आज्ञाकारीता हुन्छन् त्यसैले मन, वचन र कर्ममा पवित्र भएर स्वयंसेवी कार्यमा दत्तचित्त रहन्छन् ।”
नेपालमा ६ वर्ष उमेर पुगेपछि स्काउटको सदस्यता लिन पाइन्छ ।
kp sharma oli, nepal scouts, राम प्रसाद भट्टराई, लोकबहादुर भण्डारी
Prevफागुनमा प्याब्सन नेशनल स्कूल एक्स्पो हुने
धादिङमा दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्युNext